Disability Rights Ohio - TAKOORKA SHAQADA: Halka Laga Helo Caawimaad
Haddii aad dareentid in loo-shaqeeyuhu ku takooray iyadoo sabab u tahay naafonimadaada, waxaa jira laba hay’adood oo aad la xiriiri karto si aad u gudbiso cabasho. Cabashooyinka labada hay’adood waxaa lagu magacaabaa eedeyn. Uma baahnid inaad dacwad u gudbiso labada hay’adood maxaa yeelay way wada shaqeeyaan. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin waqtiyo aad u kala duwan oo la gudbiyo cabashada. Marka aad u gudbiso hay’adaha midkood, loo-shaqeeyahaagu wuxuu heli doonaa nuqul eedeynta ah waxaana la weydiin doonaa inay jawaab ka bixiyaan.
Telefoonka Muuqaalka Farohadalka Mareykanka (American Sign Language, ASL): 844-234-5122
Guddiga Fursadaha Shaqooyinka Loo Simanyahay (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) waxay xafiisyo ku leedahay Cleveland iyo Cincinnati, halkaas oo aad ka heli karto taageero gaar ahaaneed si aad u buuxiso foomka eedeynta. Kuma gudbin kartid eedeyn shabakada EEOC, laakiin waxaad isticmaali kartaa qalabka qiimeynta shabakada si loo go’aamiyo haddii EEOC ay tahay hay’adda saxda ah ee ku caawin karta. Sidoo kale waad buuxin kartaa, laakiin kuma gudbin kartid, foomka qaadashada onlaynka. Foomka waa in la daabaco oo loo diro EEOC ama la keeno xafiiska shaqada u dhow halka ay takooriddu ka dhacday, Cleveland ama Cincinnati midkood.
Waxaad awoodi kartaa inaad gayso dacwad maxkamadeed sida ku cad sharciga Ohio iyada oo aadan gudbin eedeyn takoorid. Si kastaba ha ahaatee, sharciyada way ka duwan yihiin marka aad maxkamad tagayso. Haddii aad rabto inaad u gudbiso dacwad maxkamadda fadaraalka, waa inaad gudbisaa eedeyn takoorid marka hore. Waa inaad tixgeliso inaad la shaqeyso qareen.
Haddii aad rabto in aad kala tashato qareen arrin ku saabsan takoorid uu sameeyay loo-shaqeeyahaaga, waxaad ka heli kartaa qareen ama ururka qareenada guud ee adeegga gudbinta adigoo kala xiriiraya Ururka Qareenada Guud ee Gobolka Ohio lambarka bilaash ah 800-282-6556.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan habsocodka eedeynta, fiiri waraaqaha xaqiiqda isxigxiga ee DRO, Hagidda Cabashada Shaqo: disabilityrightsohio.org/navigating-an-employment-complaint-somali.